Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe - Awdinle Online
Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ay sheegayaan in Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ay saaka weerar ku qaadeen bar-koontrool oo Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ku leeyihiin degmada Mahadaay ee Gobolkaas.
Goobjogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in dagaal saacado kooban socday uu Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex-maray Koontoroolka Buurane ee degmada Mahadaay, isla markaana ay maqlayeen dhawaqa hubka noocyadiisa kala duwan oo dhinacyada isku adeegsanayeen.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaalka ay ku dhinteen laba Askari oo ka tirsan Ciidamada dowladda tiro kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo dhamaantood ahaa Ciidamada ku sugan Koontoroolka Buurane.
Warar aan la xaqiijin ayaa waxaa ay sheegayaan in muddo saacado kooban ah ay Al-Shabaab la wareegeen Barta Koontorool ee degaanka buurane, kadb markii Ciidamada dowladda ay isaga baxeen.
Saraakiisha Ciidamada dowladda iyo Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe weli kama hadlin weerarkaas ka dhacay degmada mahadaay, iyada oo dhwor jeer degmadaasi ay weerareen Al-Shabaab.
Previous articleBeesha Caalamka oo diiday dalab ay u gudbiyeen Maamul Goboleedyada taageersan farmaajo
Next articleMeydka laba Carruur ah oo uu dhalay Xildhibaan hore oo laga helay duleedka Baydhabo